Oksizenina Info. About. What's This?
Fototra Zavamananaina izany ahitanana mazàna marosela, taminny sela manana vihy nucleus, sy mazàna mandevona hirana mampiasa ny alalan photosynthesis, ny zavamaniry. Plantae anisanizany zavamaniry mitondra vony, sady vafaha, kesika, volonkazo, volombato sy ahidrano maitso. Plantae tsy anisanizany ny ahidrano volontany, ny ahidrano mena na holatra. Misy zavamaniry miampe vony, voan, faka, sy zavamaniry tsy miampe vony, voan, faka. Nivoatra tsikelikely ny toetra. Voalohany zavamaniry ny ahidrano maitso. Atao hoe Angiosperm, ny zavamaniry izany ahitanana nofo voan. Atao hoe Gymnosperm ny zava ...
Ny afo dia ny hafanana sy hazavana vokatry ny firehetana haingana sy maharitra sady miteraka lelafo vokatry ny fahamaizanny zavatra dorana izay mety ho vainga na ranoka na etona. Raha te hahazo afo dia tokony hisy zavatra azo arehitra sy hafanana ambony ampy hiteraka firehetana ary oksizenina na etona hafa toy ny klora mba hamelona ny firehetana.
Ny bamban-tsiriana dia ny fitambaran ny zavamaniry hita eo amin ny toerana iray. Avahana ny bamban-tsiriana voajanahary izay ahitana zavamaniry maniry hoazy, sy ny bamban-tsiriana nataon olombelona ahitana zavamaniry novolena. Misy ny maniry an-tanety, ny maniry an-dranomasina, ny amaniry an-dranomamy sns. Ny bamban-tsiriana dia mitana ny anjara toerana lehibe amin ny famokarana sy ny fiarovana ny tany sy ny zezi-pako, ny tsingerinny karbona ary ny famokarana ny oksizenina.